Ny zoma lasa teo dia nisy ny dinidinika nahaliana niaraka tamin'ny mpisolovava Nico Meijering avy amin'ny biraon'ny Ficq & Partners malaza ao amin'ny Financieel Dagblad (FD.nl). Avelao aho aloha hiresaka momba an'i Nico Meijering. Raha ny hevitro dia isan'ireo mpisolovava ny PsyOp any Holandy. Mazava ho azy fa zavatra tsy azo inoana io, […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Novambra 2019	• 6 Comments
Ho be dia be amin'ny maro ary ho toy ny tsy misy dikany loatra rehefa miteny aho fa ny anarana hoe Philippe Schol dia misy rohy tsy voatanisa miaraka amin'i Schiphol. Topazo maso ny anaran'i Philippe Schol. Subliminal misy ny teny Schiphol. Neuro Linguistic Programming na subliminal programming dia zavatra iray izay […]
Matetika aho no miresaka momba ny olana momba ny olana, ny adihevitra, ny vahaolana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia efa nisy ny tranga famonoan'olona maro sy tranga hafa tao amin'ny fampahalalam-baovao izay tsy maintsy ekentsika fa ireo asa ara-tsaina (PsyOps) ireo dia hilalao amin'ny vahoaka. Ao amin'ny lahatsoratra maromaro, dia nanazava ny fomba [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 May 2019	• 3 Comments
Ao amin'ny resako an-telefaona miaraka amin'i Wilson Boldewijn avy ao amin'ny Telegraaf, efa niresaka tamiko aho. Ny fampahalalam-baovao dia afaka mamolavola lalina. Efa niresaka aho fa afaka mamorona tafatafa amin'ny olona tsirairay ianao amin'ny alalan'ny feo an-tsoratra sy sary. Efa nisy io fomba fiasa io ary antsoina hoe famerenana mivantana (antsoina hoe 'swap swap'). Samsung [...]
Total visits: 16.029.475